म्याकको भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने? स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल | म म्याकबाट हुँ
कसरी तपाईको म्याकको भाषा परिवर्तन गर्ने
यस ट्यूटोरियलमा हामी हाम्रो म्याकमा सबै भन्दा राम्रो भाषा सेट गर्न विकल्पहरू देख्दछौं। यदि तपाईं एकै भाषा सबै समयमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं प्रत्येक विकल्प म्याकोसमा उपलब्ध सिक्न सक्नुहुन्छ। तर यदि यसको विपरित, तपाइँले धेरै भाषाहरू, तपाइँको मातृभाषा, तर दोस्रो भाषामा काममा वा साथीहरूसँग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामी तपाइँलाई समायोजनहरू देखाउनेछौं जुन तपाइँले गर्नुपर्दछ।
तपाईको म्याकको भाषा राम्ररी छनौट गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छकम से कम स्पेनिश भाषामा, किनकि यसको छनौटमा त्रुटिले हामीलाई @ प्रतीक लेख्न जस्ता साझा प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्न रोक्छ, किनकि यो विस्थापित छ।
1 हामी म्याकोसमा कसरी भाषा छनौट गर्छौं?
2 हामी कसरी अपरेटिंग प्रणालीको भाषा परिवर्तन गर्ने?
3 म म्याक किबोर्डको भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने?
हामी म्याकोसमा कसरी भाषा छनौट गर्छौं?
हामीले कन्फिगर गर्नु पर्ने पहिलो चीज हो अपरेटिंग प्रणाली भाषा र पछि भाषा जुन हामी म्याकमा लेख्न चाहन्छौं भनेर चिनिन्छ इनपुट स्रोत. अपरेटिंग प्रणालीको भाषा र लेखनको भाषा मेल खाँदैन। उदाहरण को लागी, हामी अपरेटिंग प्रणाली को लागी स्पेनिश को चयन गर्न सक्दछौं, र अंग्रेजी वा फ्रेन्च छनौट गर्न को लागी, उदाहरण को लागी, यदि हामी यी भाषाहरु मा एक पाठ लेख्न छ।
हामी कसरी अपरेटिंग प्रणालीको भाषा परिवर्तन गर्ने?
म्याकमा, सबै प्रणाली सेटिंग्स पी मा छन्प्रणाली सन्दर्भ। यदि तपाईं नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईं यी विकल्पहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ किनभने ती धेरै सहज छन्। प्रणाली प्राथमिकताहरू पहुँच गर्न:
सबै भन्दा राम्रो छ थिच्दै, स्पोर्टलाइटको साथ आह्वान गर्नुहोस् Cmd + स्पेस।
बारमा त्यो देखिन्छ, प्रणाली प्राथमिकताहरू टाइप गर्नुहोस्।
सम्भवतः, पाठ लेख्न सक्नु अघि, अनुप्रयोग जुन तपाईंसँग परिचित हुनुहुनेछ एक गियर को प्रतीक।
अनुप्रयोगमा क्लिक गर्नुहोस् र यो खोल्नेछ।
अर्को चरण आईकन पहुँच गर्नु हो भाषा र क्षेत्र, निलो झण्डा प्रतिमाको साथ प्रणालीमा पहिचान गरियो। यदि फेरि एकचोटि, तपाईं म्यासोस उत्पादकत्व "दुरुपयोग" गरेर त्यसो गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले अनुप्रयोगको माथिल्लो दायाँ बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। भाषा. त्यहाँ चित्रमा कम छाया गरिएको छ जहाँ संकेत गरिएको पाठसँग सम्बन्धित प्रकार्य छवा, यस अवस्थामा भाषा।
क्लिक गरेपछि भाषा र क्षेत्र को मुख्य स्क्रीन भाषाको विकल्प। बाँया पट्टी, हामी यस म्याकमा सबै भन्दा सामान्य भाषाहरू चयनित देख्नेछौं। यस अवस्थामा, हालको भाषा मात्र हुनु सामान्य हो। यदि कुनै कारणले हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहान्छौं।
हामीले भर्खरै गर्नु पर्छ "+" चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् , जुन तल अवस्थित छ।
एउटा नयाँ मेनू त्यसपछि खुल्नेछ, जहाँ उपलब्ध भाषाहरू.
होशियारीका साथ हेर्नुहोस्, किनभने हामी भाषाहरू तिनीहरूका सबै भेरियन्ट्सका साथ फेला पार्छौं, उदाहरणका लागि स्पेनिश १० भन्दा बढी फरक फरक छन्।
यसलाई छनौट गरेपछि, म्याकोसले हामीलाई सोध्यो यदि हामी म्याकको मुख्य भाषा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं चयनित एक द्वारा वा हालको प्रयोग जारी राख्नुहोस्। हामी इच्छित छनौट गर्दछौं र स्वीकार गर्दछौं।
हामीले यो दिमागमा राख्नुपर्दछ कि eभाषा परिवर्तनले लेखनलाई मात्र असर गर्दैन, तर त्यो भाषाको सम्पूर्ण नामकरणलाई पनि असर गर्दछ तथ्या .्क, मिति, क्यालेन्डर संरचना र अभिव्यक्त तापक्रमको अभिव्यक्तिको सर्तमा। MacOS ले त्यो भाषाको लागि पूर्वनिर्धारित नामहरू लागू गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि हामी स्पेनिश (स्पेन) लाई छान्छौं, यसले संग्रह गर्नेछ:
क्षेत्र: स्पेन - छनौट समय प्रायद्वीप स्पेन हुनेछ।
हप्ताको पहिलो दिन: सोमबार - स्थानीय क्यालेन्डरहरूमा देखाईएको रूपमा।
पात्रो: ग्रेगोरियन - स्पेनिश भाषामा सबैभन्दा धेरै बारम्बार
जहाँसम्म, हामी हाम्रो प्राथमिकता अनुसार माथि वर्णन गरिएका कुनै पनि प्यारामिटरहरू समायोजन गर्न सक्दछौं।
म म्याक किबोर्डको भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने?
अघिल्लो विन्डोलाई नछोडी हामी तलको बटनमा फेला पार्छौं जसले हामीलाई बताउँछ किबोर्ड प्राथमिकता प्यानल ..। यसमा क्लिक गरेर हामी कुञ्जीपाटी इनपुट स्रोत परिवर्तन गर्न सक्दछौं जुन भाषा हामी लेख्छौं।
अर्कोतर्फ, यदि हामी डेस्कमा छौं र चाहन्छौं भने कुञ्जीपाटी इनपुट स्रोत पहुँच गर्नुहोस्, हामीले सेक्शनमा संकेत गरिए अनुसार प्राथमिकताहरू खोल्नै पर्छ अपरेटिंग सिस्टमको भाषामा सेटिंग्स। जब तपाईं मुख्य प्रणाली प्राथमिकता पर्दामा हुनुहुन्छ:
मा क्लिक गर्नुहोस् कीबोर्ड.
बाँया स्तम्भमा, तपाई फेरी फेला पार्नुहुनेछ भाषा / हरू जुन तपाईं लेख्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ एक थप्न चाहानुहुन्छ भने, "+" चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् र सबै उपलब्ध कीबोर्डहरूको सूची एक नयाँ विन्डोमा देखा पर्नेछ
तल,aखोजकर्ता। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि फेला पर्‍यो, यसलाई छान्नुहोस् र यो मा देखा पर्नेछ कुञ्जीपाटी फन्टहरू उपलब्ध छन्।
अन्त्यमा, तपाईले तल दुई अरू प्रकार्यहरू फेला पार्नुहुनेछ।
मेनू बारमा किबोर्ड देखाउनुहोस्: यसले हामीलाई चयनित भाषाको साथ प्रतीक देखाउनेछ। यो विशेष गरी उपयोगी छ जब हामी नियमित रूपमा भाषाहरू परिवर्तन गर्दछौं। अर्कोतर्फ, यसले अन-स्क्रिन किबोर्ड र एप्पल इमोजिस सक्रिय गर्न अनुमति दिन्छ।
स्वचालित रूपमा कागजातको इनपुट स्रोतमा स्विच गर्नुहोस्: म्याकोस हामीले लेख्ने भाषा पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छ र यसमा स्वचालित रूपमा स्विच हुन्छ।
अन्तमा, लेखको सुरूमा फर्कदै, यदि हामी चयन गर्दैनौं स्पेनिश - आईएसओनिश्चित रूपमा हामी प्रतीकहरू मार्क गर्न सक्दैनौं: एटसेन्टहरू, हाइफनहरू र यस्तै।
मलाई आशा छ कि यो ट्यूटोरियल तपाईंको रुचिमा रहेको छ र तपाईंको टिप्पणीहरू यस लेखको फेदमा छोड्नुहोस् यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » कसरी तपाईको म्याकको भाषा परिवर्तन गर्ने
अलेजेन्ड्रो जोस भन्यो
नमस्ते। मैले पहिले नै अपरेटिंग प्रणालीको भाषा परिवर्तन गरें तर मैले यसलाई कार्यक्रमहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि फायरफक्स, शब्द, ect
अलेजेन्ड्रो जोसलाई जवाफ दिनुहोस्
मँ स indicated्केत गरिएको चरणहरूलाई पूर्ण रूपले अनुसरण गर्दछु, तर त्यसो भए पनि, अ always्ग्रेजी सधैं एक मात्र भाषा रहन्छ र (मेरो मामलामा स्पेनिश) रुचाइएको भाषाको रूपमा रहनबाट रोक्दछ।
आईक्लाउड ड्राइभबाट साझेदारी गरिएका फाइलहरू मेट्नुहोस्
यस चालको साथ फोटोहरू क्षणिक रूपमा विस्तार गर्नुहोस्